Iparadesi yeMeteora B
IParadise of Meteora B ibekwe eKastraki, Kalampaka. Umgama wayo ukusuka kwisikwere, esisembindini welali, iimitha ezingama-300. Ikwakwiimitha ezingama-500 ukusuka kwindlu yeemonki yokuqala kwaye ibekwe phantsi kwamatye amakhulu eMeteora.
Sisakhiwo esitsha esihlaziyiweyo esibandakanya amagumbi okulala ama-3 aneebhedi ezinkulu ezi-3 kunye neeTV ezihlakaniphile, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye negumbi lokuhlambela, ikwanentendelezo enkulu enendawo yokupaka yasimahla.
Sisakhiwo esitsha esihlaziyiweyo esibandakanya amagumbi okulala ama-3 aneebhedi ezinkulu ezi-3 ezine-smart TV, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye negumbi lokuhlambela, ikwanentendelezo enkulu kunye nendawo yokupaka yasimahla.
Kwiimitha ezingama-300 ngeenyawo kukho iMyuziyam yeGeological Formations yaseMeteora.